I arabia Saodita - Kolontsaina, ny fahalalam-pomba sy ny Raharaham-barotra
I arabia Saodita — Kolontsaina, ny fahalalam-pomba sy ny Raharaham-barotra
Tonga soa eto amin’ny ny an-Trano an-Tserasera ara-Kolontsaina Fanentanana Antokony dia efatra amby efa-polo na ny iray noncommission-global Lalina ara-pivavahana, ara-kolontsaina nentin-drazana sy ara-jeografika sarotra mitaky fotoana sy ezaka mba hahatakatra ireo olona sy ny toerana. Sarobidy ho an’ny olona fikarohana Arabia kolontsaina, fomba amam-panao, amin’ny teny, ny fiaraha-monina, ny fahalalam-pomba, ny fahalalam-pomba, ny soatoavina, ny raharaham-barotra sy ny ankapobeny te hahatakatra ny olona tsara. Raha nitsidika an’i Arabia Saodita eo amin’ny raharaham-barotra na fampiantranoana Arabia mpanjifa eo amin ny firenena, izany mpitari-dalana dia hanampy anao hahatakatra ny namany, manatsara ny fifandraisana ary mahazo ny fifandraisana eny amin’ny tsara fanombohana. Ahoana no ahafantarantsika rehetra ity vaovao ity? Tsara, isika dia manam-pahaizana ara-kolontsaina fanentanana fiofanana amin’ny taranja Arabia Saodita — izany no fomba. Izany no ampiasaina amin’ny raharaham-barotra, ary dia tsy maintsy faharoa ampiasaina any an-tsekoly. Eo ny tsy Arabia mponina, maro ireo olona miteny Urdu, ny fiteny ofisialy ao Pakistana sy Aziatika hafa fiteny toy ny Farsi sy tiorka. Teny arabo no nolazain efa ho roanjato tapitrisa ny olona any amin’ny tany maherin’ny roa amby roa-polo firenena.
Raha niteny ny teny arabo miovaova arakaraka ny firenena, mpahay teny arabo mbola niova nandritra ny taonjato maro. Ao Arabia saodita, misy ny fahasamihafana eo amin’ny tenim-paritra voalaza ao amin’ny tanàn-dehibe sy ireo izay voalaza ao amin’ny faritra ambanivohitra ary koa eo amin’ireo any Andrefana, Atsinanana sy Atsimo. Arabia Saodita dia firenena iray, izay ny fivoriana, ny famelabelarana sy ny vaovao dia misokatra amin ‘ny anaran’ Andriamanitra.
Ny fivavahana mameno ny zava-drehetra anisan’izany ny raharaham-barotra, ny kolontsaina ary ara-tontolo iainana
Raharaham-barotra miseho amin’ny tena miadana haingana amin’ny lehibe ny fanamafisana ny fifandraisana, ny fifandraisana ao an-toerana sy ny raharaham-barotra. Raiso ny Kolontsaina Voltora ny Fanontaniana ao Arabia Saodita sy ny hahitàna hoe firy avy no nianaranao momba ny firenena, ny olona sy ny kolontsaina.
Raha afaka isa ambony, dia fantatrao ny zavatra
Efa telo minitra mba hamenoana izany — any, hizaha toetra ny tenanao. Ho an’ireo izay mila antsipirihany kokoa sy feno indray mitopy maso an’i Arabia Saodita efa namoaka manam-pahaizana manokana ny Tatitra momba ny Fiaraha-monina Saodiana ny Kolontsaina, ny Raharaham-barotra. Ny -pejy taratasy efa nataon ny iray amin’ireo Saodiana firenena manam-pahaizana manokana ary manome ny mpamaky amin’ny antsipiriany bebe kokoa fa ny maimaim-poana ny torolalana etsy ambony
← Mba handresy na miara-miaina amin'ny manirery lehilahy izany dia ny helo
Lehilahy Arabo Fotsy Ny Vehivavy →